Ogaden News Agency (ONA) – Ogadenia iyo Falastiin maxay ka midaysan yihiin maxayse ku kala gadisan yihiin? – By C. M. Ahmed.
Ogadenia iyo Falastiin maxay ka midaysan yihiin maxayse ku kala gadisan yihiin? – By C. M. Ahmed.
Waxaan wada ogsoonahay Dhulka Ogadenia inay Gumaysato Ethiopia halka dhulka Falastiina ay ka Gumaysato Israel. Hadaba Maqaalkan waxaan kulafa guraynaa wax yaabaha labada Qadiyadood iyo Shacabkoodu ay ka midaysan yihiin ee Gumaystayaashu kula kacaan iyo wax yaabaha uu midba midka kale la dheer yahay.
A- Wax yaabaha ay ka midaysan yihiin:
1-Ogadenia iyo Falastiin waa labo wadan oo Islaam ah Carabna ah.
2-Falastiin iyo Ogadenia waxaa u dhiibay oo u Gacan galiyay Labada Gumayste ee Israel iyo Ethiopia Gumaystihii hore ee Ingiriiska.
3-Gumaystihii Ingiriisku wuxuu labadan wadan bixiyay oo Gumaystayaasha hada haysta u dhiibay isku Sanad (1948). Marka laga reebo Herar oo 26-1- 1887 ay Xabashidu la wareegtay.
4-Gumaystihii Ingiriisku Ogadenia iyo Falastiinba wuxuu bixiyay iyada oo Labadii shacab ee iska lahaa aysan waxba kala soconin, oo Yahuuda intuu Caalamka oo ay ku Firidhsan yihiin ka soo u ruuriyay buu Xoog ku dajiyay Dhulka Falastiin. Sidoo kale Shacabkii Ogadenia ee uu Gumaysanayay intuu Khayaanay buu Ethiopia lagalay heshiis Taariikhdu markay ahayd 14-5-1897 wuxuuna kula heshiiyay dhulka Ogadenia inuu ku wareejin doono, ugu danbayntiina wuxuu ku wareejiyay isaga oo heshiiskaa hore Tixraacaya Sanadahan 1948 iyo 1954.
Qaybtaa hore Markii la wareejinayay waxaa Magaalada Jigjiga ku Nafwaayay 25 ruux halka ay dhaawacmeen 50 in kabadan waxayna dadkaasi ka gadoodeen oo ay diidanaayeen khayaanada uu sameeyay Ingiriisku ee Gumaystaha kale ee Afrikaanka ah ugu dhiibay Dhulkooda. Iyadoo Guud ahaan Umada Soomaaliyeedna Mudaharaadyo dhigeen ay uga soo horjeedaan dhulkooda la dhacay.
5-labada Gumayste ee Ethiopia iyo Israel waxay iska dhaadhiciyeen Dhulka ay Gumaystaan inay iyagu leeyihiin iyaga oo iska indha tira Taariikhda iyo qaabkii loogu gacan galiyay labada wadanba.
6- Labadan Gumayste ee Israel iyo Ethiopia waxay Aaminsan yihiin oo ay ku dhaqmaan Shucuubta ay Gumaystaan inay ka qixiyaan dhulkooda si ay dadkooda ugu beeraan dadkii lahaana uga isir tiraan.
Waxaynu Ognahay Malaayiin Falastiin ah inay Dibada ka joogaan dalkooda sidoo kale waxaan ognahay boqolaal kun oo Shacabka S/ogadenia ah inay u qaxeen Kenya oo Xeryaha Dadaab ay Qaxooti ku yihiin iyo wadamo badan oo Caalamka kale ah.
7-Labada Gumayste ee Ethiopia iyo Israel waxay ka midaysan yihiin xasuuqa iyo Noocyada kale ee ay u Ciqaabaan Labada Shacab ee ay Gumaystaan. Sanad kasta waxay laayaan Kuman-yaal, waxayna xidhaan oo Xabsiyada uga buuxa Kuman-yaal kale, Ethiopia waxay dabka qabadsiisay Sanadihii u danbeeyay ugu yaraan 34 Tuulo oo kamid ah Dalka Ogadenia, waxayna ka Aaastay Ceelal Fara badan, Meesha Israaiil aynu indheheena ku daawano iyada oo Guryaha Cagaf cagaf ku duminaysa, dadkana sida Roobkii hubka wax Gumaada ugu soo daadinaysa iyadoo Diyaarado adeegsanaysa.
8-Shacabka Falastiin iyo Shacabka Ogadenia mid waliba wuxuu kujiraa Go’doon. Shacabka Soomaalida Ogadenia wuxuu ku Xidhnaan jiray Xaga Ganacsiga oo ay wax is dhaafsan jireen walaalahooda Soomaaliyeed lkn Markii uu Dhacay Dagaalkii Cobolle 24-4-2007 ee halkaa Jabhada ONLF ay Cagta ku marisay Ciidamadii Gumaysiga iyo Shiinihii Khayraad Ogadenia inuu Boobo u yimid waxay Ethiopia dajisay Istiraatijiyad ay ku isirtirayso Shacabka dulman ee dhulkiisa ay haysato waxaana kamid ahaa inay Kusoo Rogtay Go’doon oo wax kabaxa iyo wax soogala ilaa Xiligaas ma uu jiro Gaadhigii isaga oo Kootarabaan ah ay Qabtaana isaga iyo Hantida saaranba way lawareegaan dadka watana halkaas bay ku Khaarajiyaan. Sidoo kale yahuudo waxay Falastiin Go’doonka rasmiga ah Saartay Gaar ahaan Marinka Qaza isla Sanadkii 2007 kadib markay Xamaas la wareegtay Maamulkeeda.
9- Ogadenia iyo Falastiin labaduba waxay ahaayeen Isticmaarka ka hor laba wadan oo Madax banaan oo ismaamula. Ogadenia waxaa ka jiri jiray Imaarado Islaami ah waxaana Xarun u ahayd Ogadenia oo ay ka Maamuli jireen Imaam Ahmed Gurey iyo Amiiradii ka danbeeyayba Magaalada Herer, Masaajidkii Taariikhiga ahaa ee Herer ku yaalayna wuxuu Gumaystuhu u badalay Markuu la wareegay Herer Kaniisad ilaa Maantana sidii buu Kaniisad u yahay.
10- Labada Gumayste ee Ethiopia iyo Israel Dulmigaa ay samaynayaan waxaa ku taageersan oo labadaba baar daajinaya oo hubka iyo dhaqaalaha ugu badanba ku siiya Dawladaha reer Galbeedka ee markii horaba u gacan galiyay Labada dal iyo Labadooda Shacab ee Islaamka ah.
11- Shacabka Ogadenia iyo ka Falastiin waxay ka midaysan yihiin Adkaysiga, waxayna Aaaminsan yihiin inay Xaqlayaal yihiin Cadawga Xooga kujooga Ciidoodana uusan xaq u lahayn inuu ku noolaado Dhimashana ay Taas ka xigaan.
A- Wax yaabaha ay ku kala gadisan yihiin:
1-Falastiin waxaa jooga Warbaahintii Caalamka oo dhan oo waxa halkaa ka socda oo dhan Camerada ayaa lagu hayaa, waxaad u jeedaan Maalin kasta wariyayaasha oo qudus ka soo Tabinaya warka iyagoo Ciidamada yahuuda oo Guryaha Cagaf Cagaf ku duminaya Dadkana Xasuuqaya badhtan kooda taagan gaar ahaan Wariyayaasha Aljazeera. Meesha Ogadenia ay ka tahay Xabsi korka ka banaan oo waxa Maalin kasta kadhacaya uusan Caalamku la soconin. Xataa BBC-da iyo VOA-da Adisababa oo Malaayiin Soomaali ah ku nooshahay hal wariye ah uma joogo iskaba dhaaf Ogadenia ee, iyada oo waliba aynu ognahay wariyayaasha Soomaalida ah ee BBC iyo VOA-da ka shaqeeya waxa ay Ethiopia raaliga katahay uun inay ku Hadlaan.
2- Falastiin ma ay Haystaan dhul wayn oo Usaamaxaya ama usuubada Jabhadaynta. Meesha Ogadenia uu ilaahay Ku Manaystay Dhul baaxadiisu balaadhantahay oo lagu qiyaaso 600,000 KM2. Buuruhuna ay ku badan yihiin iyo Togaga, Laagaha iyo dhamaan goobaha kale ee istiraatiijiga u ah in Cadawga lagula Dagaallamo.
3-Maadaama ay Ethiopia tahay Africaan gaajaysan waxay ka qaadaa Shacabka Ogadenia Gibir oo waxay dhacdaa Xoolahooda halka yahuudu ayna u baahanin Xoolo ladhaco.
4- Falastiin waxaa kamid ah Dhulkii Barakaysnaa, waa Magaalada Qudus iyo Masjidka Al-aqsaa. Goobtaas barakaysan waxay ka dhexaysaa Umada islaamka ah oo Dhan waana Muqadas. Waana mida keenaysa Islaamka iyo Kufaartu inay ku Tartamaan Goobtaas Barakaysan gacan ku haynteeda.